Nandrehitra ny fifandirana ara-poko tao Afghanistana ny vaovao faikany sy ny fanodikodinam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2018 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 繁體中文, English
Mpanao fihetsiketsehana tao Kabul manohitra ny fisamborana ny mpitari-tafika Alipoor. Sary avy amin'i Mustafa Hasani ho an'ny Sampam-baovao Hushdar. Nahazoana alalana.
Any Afghanistana, naparitaky ny manampahefana ny fanodikodinam-baovao efa voahomana ary nandrehitra ny kabarim-pankahalana ny fomba fanaon'ny fampahalalam-baovao mampahonena.
Ny 25 Novambra, nidina an-dalamben'i Daykundi, Bamiyan, Mazar-e Sharif, Herat, Ghor ary Kabul ireo Hazara mpanao hetsi-panoherana an-jatony mba hanohitra ny fisamborana ny mpitari-tafika milisy Alipoor, izay nanana tafika niady tamin'ireo milisy Taliban manerana ny afovoan'i Afghanistana.
Nitranga taorian'ny tsy nahavitann'ny governemanta namaly haingana ireo fanafihana izay nahafatesan'olona nataon'ny milisy Taliban tany amin'ny distrika miisa telo misy ireo mponina vitsy an'isa ny hetsi-panoherana.
Tao anatin'ny antsafa iray, Alipoor, izay nantsoina ho “mpanao heloka bevava” ho an'ireo mpitsikera azy sy “mpiaro ny vahoaka” ho an'ny mpanohana azy, dia nilaza hoe :
Zontsika mazava ho azy ny miaro tena rehefa tsy mahavita miaro ny vahoaka ny governemanta. Nifidy azy ireo ny vahoaka ary nanohana azy ireo mba hitantana ny governemanta, noho izany izy ireo dia afaka mampihatra ny lalàna ary mivoy fitantanana matanjaka, saingy tsy nahomby izy ireo. Tsy misy olona mahatsiaro ho voaaro. Rehefa tsy misy fiarovana dia tsy misy ny governemanta. Mila ny rariny, ny filaminana sy ny fahamarinan-toerana izahay mba ahafahan'ny olona miaina ny fiainany. Noho izany antony izany dia tsy afa-manontany ahy hoe nahoana aho no mitam-piadiana ny governemanta tsy afaka miantoka ny fiarovana azy ireo manokana.
Noafahana avy any am-ponja i Alipoor ny 26 Novambra, saingy taorian'ny hetsi-panoherana tao Kabul izay efa nivadika ho herisetra izany. Nilaza ireo manampahefana Afghàna fa polisy am-polony no naratra noho ny tora-bato ary nodorana ny paositry ny polisy sasany. Avy amin'ny baikon'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny firenena no nisamborana an'i Alipoor .
Nisy lahatsary navoakan'ny Etilaatroz ny 26 Novambra, iray amin'ireo gazety malaza indrindra ao Afghanistana, izay nampiseho ireo polisy nitifitra tany amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana tsy mitam-piadiana.
Nilaza ny minisitra lefitry ny atitany fa tsy nisy ny olona maty nandritra ny hetsi-panoherana na dia niparitaka an- tserasera aza ny sary mihoson-dra an'ireo mpanao hetsi-panoherana voatifitra tamin'ny lohany sy ireo tovovavy mpianatra maty .
Farafahakeliny olona miisa efatra no maty tany Kabul araka ny fitantaran'ireo fampitam-baovao isan-karazany, niaraka tamin'ny olona miisa 22 naratra. Tao Bamiyan, olona miisa fito no voalaza fa maty.
Taorian'ilay fihetsiketsehana dia olona maherin'ny 80 no voasambotra, anisan'izany ireo zazavavy sy ankizy eo anelanelan'ny 8 sy 16 taona.
Saripika ahitana vatana mangatsiaka miisa efatra farafahakeliny izay nozaraina betsaka tao amin'ny tambajotra sosialy, anisan'izany ny ankizivavy mpianatra. Olona maty tao amin'ny hopitalin'i Kabul Andrefana. Gaga raha nandre ny minisitra lefitry ny atitany Gen Ibrahimi nilaza fa tsy nisy maty?
Nampisaratsaraka ny vahoaka Afghana ny raharahan'i Alipoor. Ity fanangonan-kevitra matanjaka ity dia ahitana taratra ny fizarazarana ara-tsosialy, ara-politika ary ara-poko izay mihalalina ao Afghanistana ao anatin'ny tsy fahampian'ny tsy fandriampahalemana isan'andro.
Manome vahana ny fanodikodinam-baovao ny toe-javatra toy izany mba hambolena sy hanamafisana ny kabarim-pankahalana amin'ny samy antoko.
Mibosesika ny vaovao faikany
Raha nirongatra ny fihetseham-po anti-Hazara tao Afghanistana dia niseho tao amin'ny Twitter ireo mpanao gazety, ireo governora teo aloha, ary ny olona tsirairay nampiseho ny fomba namonoan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy. Faikany ity sary nivezivezy ity raha ny marina. An'i Wakil Kohsar ny sary ary nalaina tamin'ny taona 2016, 2 taona lasa izay.
Tamin'ny fihaonana niaraka tamin'ny filoha lefitra Afghana Sarwar Danish tamin'ny 24 Novambra, dia nanambara ny Mpitantana Nasionaly ny Lehiben'ny Mpitandro Filaminana, Massoum Stanekzai, fa nosamborin'ny Amerikanina i Alipoor ary avy eo natolotra ny sampam-pitsikilovana Afghana.
Rehefa nanomboka nivezivezy tao amin'ny aterineto ity fanambarana ity dia nanambara tao amin'ny Twitter ny mpitondratenin'ny tafika Amerikana fa tsy nisy ny fandraisana anjaran'i Washington tamin'ny raharaha .
Tonga mivantana avy amin'ny sehatra fampahalalam-baovao mahazatra amin'ny ankapobeny ny fanodikodinam-baovao hafa, toy ny sampan-draharaha Afghana RFE / RL, Azadi.
Mpisera marobe tao amin'ny tambajotra sosialy no nilaza fa nampiasa sary Reuters tamin'ny taona 2016 ny sampan-draharaha mba hanehoana lahatsoratra iray momba ny fihetsiketsehana tamin'ity volana ity. Nampiseho ny polisy naratra nentin'ny fiaran'ny miaramila ary nentina taorian'ny fipoahana baomba tao Kabul ny sary.
Ity dia ohatra mazava mikasika ny fomba fiezahan'ny seha-pampahalalam-baovao iraisam-pirenena @DaRadioAzadi ao Afganisthana handrehetana ny fifandonana ara-poko sy hamoronana ny fankahalana eo amin'ny governemanta sy ny olom-pirenena. Nampiasa sary nalaina avy amin'ireo niharam-boinan'ny polisy teo aloha ny mpitati-baovao mba hampisehoana fa noratrain'ny mpanao fihetsiketsehana izy ireo androany.
Ny hatsikana no fanafody ao anaty tontolo an-tserasera nahitana fanaratsiana mangidy.
Nanosika ny mpisera sasany hitodika any amin'ny famoronana eso ny fiparitahan'ny vaovao faikany taorian'ny hetsi-panoherana ho an'i Alipoor :
Mihevitra ny mpahay siansa fa nampitombo ny tahan'ny fandotoan-drivotra ny hetsi-panoherana farany nokarakaraina tao Kabul ary antony voalohany nahatonga ny haintany tamin'ity taona ity tany avaratra andrefan'ny AFG. Rehefa nanontaniana ny hevitr'ireo mpahay siansa dia nanome tsiny an'i Iran izy ireo noho ny fanomezana ho an'i Hazaras ny teknolojia tsy fantatra anarana saro-pantarina
VAOVAO: Tonga eny amin'ny Mars i Alipoor.